VAITRA - Tononkira Malagasy - serasera.org
Nampiditra : Pierre
Tamin'ny : 10/03/2005 04:56:49
Vao avy Namoaka Raki-kira ny tarika vaitra izay mitondra ny lohateny hoe " Lasany " izay mendrika henoina . Betsaka ny karazana gadon-kira ao anatiny : Slow,salegy, country,.... Tsara ny hiran'izy ireo sady voafehiny tsara ny tonony sy ny feony . Mampirisika ny rehetra hanaraka io tarika io . Ny dikan'ny Vaitra moa dia hoe " Vazo Iangaliana sy TRAndrahana".Ny hirany tiako indrindra dia ilay hoe "Nihodi-na kely " izay miresaka indrindra ny "fihodinan'ny lehilahy " .
Pierre (10/03/2005 09:56:49)
Dona (27/05/2004 07:50:51)
Ny tarika VAITRA dia ahitana an'i Pierrot avy eo Alarobia, sefon'ny tarika, sady mpihira izy no mpandihy ary koa mpitendry. Ao ihany koa i Nônô, Haingo samy mpihira ary samy mpitendry ihany koa, ny hany mba viavy ao @ tarika dia i Ny Aina. Efa maro ireo hira no mandeha eo radio isan-karazany toy ny hoe "Lasany, Hay ve, Tsy tantiko..."